अर्कैसँग यौन प्यास मेटाएकी तन्नेरी हरु आफू भर्जिन बन्न यस्तो समेत गर्दा रहेछन - Eall Nepal
यास्मिन (नाम परिवर्तन) निकै भाबुक देखिन्छन् । उनी आफ्नो नङ दाँतले लगातार टोकिरहेकी छिन् अनि लगातार मोबाइन चलाइरहेकी छिन् । ‘म यसलाई धोकाका रुपमा मान्छु र यसकारण निकै दुःखी छु ।’- उनले भनिन ।
दबाब ट्युनियसामा कतिपयको बिहे हुनासाथ डिभोर्स हुने गरेको घटना बाहिर आउन थालेको छ । त्यसको मुख्य कारण पुरुषले आफ्नी श्रीमती भर्जिन नभएको शंका गर्ने गरेको देखिएको छ ।
‘गाइनाकोलोजिस्टले हाइमनलाई पुनः राखिदिने गर्दछन् । यो कुनै अपवाद होइन । यहाँ कुनै पनि डाक्टरले यसो गर्दैनन् । म निजी रुपमा यस्तो गर्छु किनभने म ती मानिससँग सहमत छैन जसले भर्जिनिटीलाई पवित्र मान्छन् । म भन्छु कि यो सबै पुरुष प्रभुत्व हो र म यसकाविरुद्ध युद्ध जारी राख्नेछु ।’- डा. रशिदले भने । भर्जिन नभए सम्बन्ध विच्छेद
समाजशास्त्री सामिया एलुमी भन्छिन- ‘ट्युनिशियाको समाज एक खुल्ला समाज हो तर हामी पाखण्डी भइरहेका छौं । यहाँ सामाजिक रुढिवादी निकै प्रबल रुपमा छ र हामी यसलाई आधुनिक समाजमा सही मान्न सक्दैनौं । महिलाको कामुकता र उनीहरुको स्वतन्त्रताको मामलामा आधुनिकता अहिले पनि कोषौँ टाढा छ ।’ एउटा सरकारी विश्वविद्यालयमा मेरो भेट इशेनसँग भयो । २९ वर्षीय इशेन आउने बर्ष बिहे गर्दैछन् । मैले उनलाई सोधेँ – ‘के तिमी तिम्रो हुनेवाला श्रीमतीको भर्जिनटीको बारेमा वास्ता गर्छौ कि गदैनौँ ?’
इशेन नजिकै बसेका उनका साथीले भने ट्युनिशियाली परम्पराका कारण महिलाले प्रताडना झेल्नुपरेको बताए । ‘यो पाखण्ड मात्र हो मेरो लागि,’ उनले भने, ‘यदि पुरुषले विवाहपूर्व यौनसम्बन्ध राख्न सक्छ भने महिला भने महिलालाई मात्रै किन कठघरामा खडा गरिनुपर्ने ? सेहम हसैनी, बीबीसी
थाहा पाइराख्नुहोस यसकारण गर्भवति भएको बेलामा महिलालाई वाकवाकी लाग्छ